Onye na-egbu ugwu nke ugwu Gorilla nwetara afọ 11 n'ụlọ mkpọrọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Onye na-egbu ugwu nke ugwu Gorilla nwetara afọ 11 n'ụlọ mkpọrọ
Na-agbasa News Travel • omenala • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Rafiki ugwu ozodimgba egbu egbu
Courtlọ ikpe Magaba nke Kabale na July 30, 2020 mara Byamukama Felix mkpọrọ afọ 11 maka igbu ọchụ Rafiki, Silverback nke ndi Nkuringo Gorilla, na anụ ọhịa ndị ọzọ dị na Bwindi National Park. Byamukama kwenyere na ikpe 3 dị na ya gụnyere ntinye iwu na-akwadoghị yana igbu ozodimgba ugwu na duiker. Onye isi ndị ọka ikpe, Ofufe ya Julius Borere, mara ya ikpe 5, 6, na 5 afọ n'otu n'otu ga-eje ozi n'otu oge.
N'okwu nke abụọ, Byamukama rịọrọ ikpe maka igbu ọchụ, na-enwe ezi ezì na anụ duiker nke a mara ya ikpe afọ 5 na ọnụ ọgụgụ ọ bụla, ka ọ na-agba ọsọ n'otu oge ka ọ gachara afọ 6 mbụ na faịlụ ahụ. otu. Ya mere, ọ ga - eje ozi afọ 11.
The ihe mbụ merenụ mere eTurboNews na June 12 tinyere ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mba dị iche iche na-akpata oke iwe ụwa niile na ụfọdụ na-akpọ ka ogologo oge.
Byamukama Felix bụ onye bi na obodo Murole, Nteko Parish, Nyabwishenya Sub County, Kisoro District ma nwụchie ya na June 4, 2020 na-esochi ọnwụ Rafiki, Silverback nke ndị otu Nkuringo. Mgbe achọchara ya, achọpụtara ya inwe anụ ezi ezì na ọtụtụ ngwa ịchụ nta gụnyere ube, ọnyà ụdọ, ọnyà ụdọ, na mgbịrịgba ịchụ nta nkịta nke e nwetara n'ụlọ ya. Ndị ọrụ ibe ya 3 bụ Bampabenda Evarist, Museveni Valence, na Mubangizi Yonasi gọrọ ebubo a ma nye ha ụlọ mkpọrọ Kisoro.
Onye isi oche nke Uganda Wildlife Authority (UWA), Sam Mwandha, nabatara mkpebi ụlọ ikpe na-ekwu na Rafiki enwetawo ikpe ziri ezi. “Obi ruru anyị ala na Rafiki enwetala ikpe nkwụmọtọ, nke a kwesịkwara ịbụ ihe atụ nye ndị ọzọ na-egbu anụ ọhịa. Ọ bụrụ na otu onye egbuo anụ ọhịa, anyị niile ga-atụfu; ya mere, anyị na-arịọ mmadụ niile ka ha kwado mbọ anyị na-agba ichekwa anụ ọhịa maka ọgbọ ndị dị ugbu a na ndị ga-abịa n’ọdịnihu, ”ka o kwuru. Mwandha gara n'ihu kọwaa na iwu ọhụrụ ahụ (Wildlife Act 2019) siri ike nakwa na onye ọ bụla tinyere aka n'ihe gbasara anụ ọhịa na-ezighi ezi ga-enweta iwe nke iwu ahụ.
Na June 1, 2020, Rafiki ka a na-efu na otu ahụ na June 2, 2020, otu ndị otu gbagoro ịchọ ọlaọcha efu efu. Emechara ahụ ozu Rafiki na mpaghara Hakato dị na Bwindi Impenetrable Forest National Park.
Ọnwụ Rafiki hapụrụ ezighi ezi na ezinaụlọ Nkuringo n'ihi na onwebeghị onye nọchiri anya iweghara ọchịchị nke Njuringo. Rangers na-enyocha ìgwè ozodimgba ugwu ahụ n'ihi na ọ ka na-enwe ike ịwakpo ndị ozodimgba ndị na-adịghị ebi. A na-ekwu na ọ bụ ekeresimesi ma ọ bụ Posho ga-anara ndị isi otu a.